exchange stock German iqwalasela uqala iimveliso Bitcoin
German Boerse, umnini Frankfurt Stock Exchange, ucinga umnikelo iimveliso cryptocurrency, ngokutsho ingxelo.
Ethetha emcimbini koshishino eLondon ngoLwesithathu, Jeffrey Tessler, intloko beqinile ngayo iinkonzo, iimveliso kunye core iimarike bathi:
“Thina nzulu emsebenzini nayo.”
US uqala uphando mthethweni ngokulungisa ixabiso Bitcoin
ISebe lezoBulungisa uvule uphando urhwebo olungekho mthethweni, ngokukodwa ukuba bakwaKanan criminally balawula ixabiso ka Bitcoin, ngokwendlela abantu abane eziqhelekileyo lo mbandela.
Abatshutshisi Federal Sisebenzisana kunye yorhwebo Futures Trading Commission, komlawuli zemali esingathi ivelela yezabelo ebotshelelwe Bitcoin.
Le amaqhinga ngokwesini okwenza ukuba iSebe lezoBulungisa swi zibandakanya spoofing ugeze sorhwebo, ezo izenzo ezingekho mthethweni ezinokuba nefuthe amaxabiso. in spoofing, umrhwebi langenisa imiyalelo uze izenza kanye amaxabiso ukusuka ngakwicala oyifunayo.
abathengisa zokuhlamba ziquka urhwebo cheater kunye yabo ukunika uluvo wobuxoki okufunwa ziimalike ukuba ukhanga abanye ukuba ngena kakhulu.
Ezi iintlobo yokukopela ukuba nabalawuli baye bachitha iminyaka izama ukuyisusa lekusasa ezingenanzala iimarike.
ibhanki Thai lizalisa intengiselwano ngamazwe usebenzisa blockchain
yebhanki Krungsri ZaseThailand kuqhutywa ngempumelelo itransekshini cross-komda “kumcimbi lemizuzwana” nebhanki Singapore usebenzisa blockchain.
Ukusebenzisa obu bugcisa kwixesha elizayo kuya kwenza ibhanki Singapore, Mitsubishi, kunye yezizathu nezinye iinkampani ukuba “ngcono ukusebenza kwawo amandla okuhlawula amatyala kunye nokunciphisa iindleko zabo” uthe ibhange.
crypto fund First hedge lisungulwe Australia
Australia i-Wonke eyiNkunzi iye yasungula cryptocurrency-zijolise hedge fund lokuqala eli lizwe bezimali ngemiyinge emincinci.
Tom Surman, co-ngumseki kunye nomlawuli yenkampani kulawulo lwe investment Australia-based, wathi:
“Sicela Siyazingca ukuba abe ngomnye mali yokuqala neevenkile ezenza cryptocurrency kunye nobugcisa blockchain ekhoyo njenge investment yeqondo eliphezulu zonke Australian. "
Ngokuka Surman, ngoxa abaninzi Australia ufuna ukutyala cryptocurrencies, ukungabikho technical bazi-ngayo ukunqanda uninzi kwabo diving emanzini lwemali digital.
tech Japanese yeMfuzo omkhulu ukuba balubumbe 7nm Bitcoin wasemgodini
Japanese IT giant yeMfuzo Internet kulindeleke ukuba balubumbe isixhobo Bitcoin imigodi ngokusekelwe chips 7nm ngasekupheleni kwalo nyaka.
Le nkampani ithe isungula le wasemgodini omtsha B2 on June 6th kufuyo ngobuninzi ukulandela kungekudala, kwaye ziye ekuqaleni ngo-Oktobha.
I saziso wathi isixhobo kufuneka ukunikezela-amanqanaba amandla hashing ezifunwa umbane ephantsi.
Coinbase izuza Paradex exchange crypto & uceba ukunikela ngeenkonzo ngaphandle US
Coinbase, le platform ye crypto Exchange likhulu US, uye exchange eyaba ezifunyenwe platform Paradex.
Paradex ontanga-to-peer wesevisi okunika abasebenzisi ikhono norhwebelwano cryptos evela izipaji zabo ngqo kunokuba usebenzise ngemisebenzi efana Coinbase, Gemini, etc. Ngaloo ndlela, abasebenzisi banamalungelo ezipheleleyo onelungelo phezu iimpawu zazo kunye capital eyake.
Coinbase uceba ukwenza ezinye izincedisi kubuchwepheshe kunye ukuqalisa iinkonzo Paradex ukuba abathengi ngaphandle United States.
inkampani amandla Czech lwiimi ukuba bayazamkela iintlawulo Bitcoin
Enye iinkampani igesi yendalo likhulu Czech Republic, igesi Prague, ibhengeze izicwangciso ukwamkela Bitcoin kwinyanga ezayo.
Le nkampani amandla nkampani kuphela shishini ukuba athathe i nyathelo.
Ngoku, Prague izinto Gas umbane Ngaphezu 420,000 abathengi kunye negesi.
Browser-based imigodi uya kuya kuxhaphaka kakhulu
esekelwe lwemali m Browser ...